သရှောပွနျ နိုငျလူ သို့မဟူတျ သဘေေးစကျကှငျးမှ မသဘေဲလှတျမွောကျလာသူ – Maythadin
အနုပညာ လောကမှာ နိုငျလူလို့ပွောလိုကျရငျ မသိသူ ခပျရှားရှား ရယျပါ လူဆိုးလူမိုကျ ဗီလိနျ ဇာတျရုပျတှနေဲ့ လူသိမြားခဲ့သူ ဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှု့ အခိုငျမာ ရရှိထားတဲ့ လူကွမျးမငျးသားကွီးလဲ ဖွဈပါတယျ ဖွဈရပျက ဒီလိုဗြ့ စဈကိုငျးလေးမကျြနှာ ဘုရားပှဲမှာ သီခငျြးသှားဆိုတော့
စငျအောကျက ခလေးတဈယောကျက လကျအုပျလေး ခြီပီးတော့ ကနြျော က ဥျီးနိုငျလူရဲ့ ပရိသတျပါ အဖေ အမတှေကေလဲ ဦးနိုငျလူကို အရမျးအားပေးကွတယျ အိမျကိုလိုကျခဲ့ပေးပါလားတဲ့
ကနြျောကလဲ အေးလို့ သီခငျြးဆိုရငျး တနျးလနျးကွီးနဲ့ ဆိုပီးရငျ လိုကျခဲ့မယျလို့ ပွောလိုကျတယျ အခြိနျက ည့ဆယျ့နှဈကြျောနပွေီ သီခငျြးဆျိုပီးတော့ နှဈနာရီရှိပွီ ဘာနဲ့ သှားမှာလဲ မေးတော့ ဆူပါကတျဆိုငျကယျအစုတျလေးနဲ့ နှဈယောကျ နောကျကလိုကျရတာပေါ့ ခွနေငျးပွားက မရှိဘူး ဆနျ့ငငျဆနျ့ငငျနဲ့ ပါသှားလရေော
သူ့အိမျရောကျတော့ သူ့မိဘတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးဘာညာစကား ခဏပွောပျွိးပွနျလာခဲ့တယျ သူ့အိမျကလဲ သိပျ မပွညျ့စုံရှာပါဘူး ပွနျလာတော့ အခြိနျက အခြိနျကောငျး ဝိုးတဝါးမှောငျမိုကျနပွေီ စဈကိုငျးGTC တံတားနမညျကွီးတယျဆိုတာ နောကျမှသိရတာ အဲ့GTCတံတားရှမှေ့ာ စလိုးဂုနျးရှိတယျ အဲ့ စလိုးဂုနျးကိုကြျောလိုကျတာ ကံတ်တရာလမျးက ကှဲပီး ထိုးထောငျနတေဲ့
သံခေါငျးတှေ ခွထေောကျထဲ ထုတျခငျြးပေါကျဝငျသှားတယျ အာ့နဲ့ ညီလေး အကိုတော့ ထိသှားပွီ မရတော့ဘူး ဆေးရုံသှားမှ ဖွဈတော့မယျ ပွောတော့ ဟူတျအကိုဆိုပီး ခဏဆငျးဆိုပီး ဆိုငျကယျနဲ့ ဝေါခနဲထှကျပွေးသှားတာ အမှောငျကွီး ဘယျနရော ဘယျဒသေဆိုတာလဲ မသိ ဘယျရောကျလို့ ဘယျပေါကျနတောလဲ မသိ ပရိသတျကိုခဈြလို့သာ လိုကျသှားတာ
ကောငျးကငျမှာကွယျလဲမရှိဘူး ​မှောကျမိုကျနတော သှားကလဲမသှားနိုငျ တရှတျတိုကျကွီး ကတ်တရာလမျးပျေါ ဆှဲရငျး ကယျကွပါအုံး ကယျကွပါအုံး ပါးစပျကအျောလိုကျ လကျနဲ့တရှတျဆှဲရှသှေ့ားလိုကျ ခွထေောကျကသှေးတှကေလဲ တလိမျ့လိမျ့စီးကနြတော ဗှကျကိုအိုငျလို့ ​
ခေါငျးကလဲ မူးဝနေပွေီး နောကျ၁၅မိနဈလောကျဆို သတေော့မှာ သှေးလှနျနဆေဲ လူငယျလေးနှဈယောကျ ဆိုငျကယျနဲ့ရောကျလာတယျ အနီးနားရောကျတော့ ဓာတျမီးနဲ့ ထိုးကွညျ့တယျ ဟာ့ ဦးနိုငျလူကွီးပါလားဆိုပီး ဆိုငျကယျပျေါ အမွနျဆှဲတငျပီး ဆေးရုံကို ပို့ပေးလို့ နို့မိုဆို နောကျ၁၅မိနဈလောကျဆို
သှေးလှနျပွီးသပွေီပဲ အဲ့လိုနဲ့ သကေံမရောကျ အသကျမပြောကျခဲ့တဲ့ ဦးနိုငျလူရဲ့ ပရိသတျကို ခဈြမွတျနိုးတဲ့ စိတျဟာ အငျမတနျလေးစားဖို့ ကောငျးလှနျးပါတယျ ။ဦးနိုငျလူပရိသတျတှေ ရှိသေးလားဗြာ?
အနုပညာ လောကမှာ နိုင်လူလို့ပြောလိုက်ရင် မသိသူ ခပ်ရှားရှား ရယ်ပါ လူဆိုးလူမိုက် ဗီလိန် ဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ လူသိများခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု့ အခိုင်မာ ရရှိထားတဲ့ လူကြမ်းမင်းသားကြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ရပ်က ဒီလိုဗျ့ စစ်ကိုင်းလေးမျက်နှာ ဘုရားပွဲမှာ သီချင်းသွားဆိုတော့
စင်အောက်က ခလေးတစ်ယောက်က လက်အုပ်လေး ချီပီးတော့ ကျနော် က ဉ်ီးနိုင်လူရဲ့ ပရိသတ်ပါ အဖေ အမေတွေကလဲ ဦးနိုင်လူကို အရမ်းအားပေးကြတယ် အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါလားတဲ့
ကျနော်ကလဲ အေးလို့ သီချင်းဆိုရင်း တန်းလန်းကြီးနဲ့ ဆိုပီးရင် လိုက်ခဲ့မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် အချိန်က ည့ဆယ့်နှစ်ကျော်နေပြီ သီချင်းဆ်ိုပီးတော့ နှစ်နာရီရှိပြီ ဘာနဲ့ သွားမှာလဲ မေးတော့ ဆူပါကတ်ဆိုင်ကယ်အစုတ်လေးနဲ့ နှစ်ယောက် နောက်ကလိုက်ရတာပေါ့ ခြေနင်းပြားက မရှိဘူး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ပါသွားလေရော
သူ့အိမ်ရောက်တော့ သူ့မိဘတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဘာညာစကား ခဏပြောပြ်ိးပြန်လာခဲ့တယ် သူ့အိမ်ကလဲ သိပ် မပြည့်စုံရှာပါဘူး ပြန်လာတော့ အချိန်က အချိန်ကောင်း ဝိုးတဝါးမှောင်မိုက်နေပြီ စစ်ကိုင်းGTC တံတားနမည်ကြီးတယ်ဆိုတာ နောက်မှသိရတာ အဲ့GTCတံတားရှေ့မှာ စလိုးဂုန်းရှိတယ် အဲ့ စလိုးဂုန်းကိုကျော်လိုက်တာ ကံတ္တရာလမ်းက ကွဲပီး ထိုးထောင်နေတဲ့
သံခေါင်းတွေ ခြေထောက်ထဲ ထုတ်ချင်းပေါက်ဝင်သွားတယ် အာ့နဲ့ ညီလေး အကိုတော့ ထိသွားပြီ မရတော့ဘူး ဆေးရုံသွားမှ ဖြစ်တော့မယ် ပြောတော့ ဟူတ်အကိုဆိုပီး ခဏဆင်းဆိုပီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဝေါခနဲထွက်ပြေးသွားတာ အမှောင်ကြီး ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသဆိုတာလဲ မသိ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်နေတာလဲ မသိ ပရိသတ်ကိုချစ်လို့သာ လိုက်သွားတာ
ကောင်းကင်မှာကြယ်လဲမရှိဘူး ​မှောက်မိုက်နေတာ သွားကလဲမသွားနိုင် တရွတ်တိုက်ကြီး ကတ္တရာလမ်းပေါ် ဆွဲရင်း ကယ်ကြပါအုံး ကယ်ကြပါအုံး ပါးစပ်ကအော်လိုက် လက်နဲ့တရွတ်ဆွဲရှေ့သွားလိုက် ခြေထောက်ကသွေးတွေကလဲ တလိမ့်လိမ့်စီးကျနေတာ ဗွက်ကိုအိုင်လို့ ​
ခေါင်းကလဲ မူးဝေနေပြီး နောက်၁၅မိနစ်လောက်ဆို သေတော့မှာ သွေးလွန်နေဆဲ လူငယ်လေးနှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာတယ် အနီးနားရောက်တော့ ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်တယ် ဟာ့ ဦးနိုင်လူကြီးပါလားဆိုပီး ဆိုင်ကယ်ပေါ် အမြန်ဆွဲတင်ပီး ဆေးရုံကို ပို့ပေးလို့ နို့မိုဆို နောက်၁၅မိနစ်လောက်ဆို
သွေးလွန်ပြီးသေပြီပဲ အဲ့လိုနဲ့ သေကံမရောက် အသက်မပျောက်ခဲ့တဲ့ ဦးနိုင်လူရဲ့ ပရိသတ်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်ဟာ အင်မတန်လေးစားဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ် ။ဦးနိုင်လူပရိသတ်တွေ ရှိသေးလားဗျာ?
ပွညျသူတှတေောငျးတနတေဲ့ အခွအေနမြေိုးအမွနျရောကျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျမမေီကိုကို